Madagasikara, ho an’ny Malagasy ? | NewsMada
Izay mihitsy ! Mampihetsi-po sy mamelombelona ny fitiavan-tanindrazana tokoa io hiran’i Naly Rakotofiringa io : … Madagasikara, ho an’ny malagasy… Azo sary an-tsaina ny firedaredan’ny faniriana tao amin’ny mpanoratra, tamin’ny fotoana nanoratany azy. Faniriana lalina ny hahatafita soa ny Malagasy : hiadana sy ho finaritra eo amin’ny tany efa nomen’Andriamanitra azy. Indrisy anefa…
Zary lasa fanontaniana io firariana io, ampolo taona maro aty aoriana. Tsotra ny antony, toa mampisalasala ny maha antsika ity Nosy ity. Efa be ny ranomainty nikoriana, nitanisa ny ataon’ny vahiny, namariparitra sy nanoritsoritra ary namefy ny tany nonenan’ny Malagasy, taranaka nifandimby, an-taonany maro.
Tsy rariny izany, hoy ireo mihevitra fa, na inona na inona, i Madagasikara anie ka ho an’ny Malagasy e ! Hitsiny kosa, ho an’ny mpanam-bola, manara-dalàna… lalàna novolavolaina tamin’ny andron’ny vahiny, mpanjanaka.
I Madagasikara, tsy an’ny mpanjanaka intsony. Efa mahaleo tena tanteraka izy, manana ny fiandrianam-pireneny. Malalaka amin’ny fisafidianana izay hitondra azy ny vahoakany. Toy izany koa ny rafitra hitantanana ny firenena, sns. Tsy azo adinoina, manana ny tenim-pireneny koa izy. Ampy hilazana ireo voalaza rehetra ireo fa mahaleotena ity Nosy ity ?
Izay rehetra toloran’ny vahoaka fahefana eto, tsy maintsy manana politika ankapobeny hoentiny hampandrosoana ny firenena. Izao anefa, tsy tokony hohadinoiny fa, raha te hiara-hiasa amin’ireo mpamatsy vola vahiny ny fanjakana malagasy, misy ny fepetra tsy maintsy arahiny ; fepetra toy ny sabatra roa lela, heverina hamelona nefa mety hahafaty ny vahoaka entiny.
Santionany amin’ireny fepetra ireny ny fanafoanana ny fanampiana na « subvention » ho an’ny sehatra sasany, toy ny fitaterana. Raha tanterahina izany, tsy afa-kizaka irery ny mety ho fiakaran’ny vidin-tsolika ny mpitatitra. Ho mora aminy ny hanamarina ny fampiakarana ny saran-dalana ary tsy misy afa-tsy ny valalabemandry no ho sahirana.
Malagasy ny mpitondra, Malagasy koa no entiny, saingy i Madagasikara, toa tsy an’ny Malagasy.